China abakhiqizi bomshini wesigaba esiphindwe kabili we-extrusion pelletizing nabaphakeli | Imishini Yokuceba
1. Isithuthi: dlulisa ifilimu ye-PP PE noma ama-flakes ku-compactor / feeder. 2. PE ifilimu icompactor: ichoboza futhi icindezele ifilimu, futhi ifedcompressed ifilimu ku-extruder ngenkani, ukwenza amandla wokukhiqiza abe phezulu futhi azinzile.
Isici NokusebenzaUmshini wokukhiqiza wePellet:
Lo mugqa wokusebenzisa amandla, ukwenza kabusha ifilimu le-PP PE, izikhwama, ama-flakes, kuwenze abe ngamapellets.
Inqubo yokugeleza womshini wokukhiqiza wePellet :
Elihambayo → impahla eluhlaza compactor (feeder) → Extruding uhlelo → Die-ikhanda futhi ngesivinini High Net ukushintshisana uhlelo → amanzi indandatho pelletizing uhlelo / indolomba uhlobo pelletizing uhlelo → umshini wokunisela amanzi → isixwayisi ngesihlungo → Air Blower → Isitoreji hopper
I-wire and cable insulation and plastic sheathing eyaziwa ngokuthi ikhebula impahla, kufaka phakathi irabha, ipulasitiki, inayiloni nezinye izinhlobo.I-cable enamathela isuselwa ku-Extrusion.Izinto eziyinhloko zentambo emakethe manje: i-PVC cable granulator, i-CPE cable granulator, intuthu ephansi engeyona ikhebula le-halogen material granulation umshini, njll.
Izici zesigaba ezimbili:
Isigaba sokuqala SHJ twin isikulufa extruder ngaphandle die. Ngokuhlanganiswa komgqomo nesikulufu, i-extruder ingakhipha amandla ayo okuqina okokusebenza kwe-therm efana nokuncibilika kwe-PVC, ukuxubana, ukusabalalisa kanye nokwabela phansi amandla ngaphansi kwesimo sokucindezelwa emuva.
Isigaba sesibili yi-SJ single screw extruder. Ngenxa yejubane eliphansi lokujikeleza, lingancibilika, lihlanganise ubude futhi lenze imicu ngokuqinile, igweme ukufudumeza.
I-pellet ephezulu ye-pvc epulasitiki eyenza umugqa wokukhiqiza umugqa we-granulation wesigaba sekhebula nocingo
Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe we-granulating extruders wokufaka umbala / ukudaya, ukugcwalisa ukukhiqizwa kwe-masterbatch, kanye nokuguqulwa kwepulasitiki nokuhlanganiswa, ukuphinda kusetshenziswe kabusha kwepulasitiki. Inkampani ihambisana ngokuqinile nohlelo lwe-CE nolwe-ISO9001 lokulawulwa kwekhwalithi yokuphathwa kokukhiqiza. Ngokuqinisekile uzothola nemishini yobuchwepheshe nezinsizakalo zesici lapha.
Umugqa we-PP uncibilika ngomugqa we-extrusion
umshini we-degas extruder owodwa